Madaxweyne Waare oo u qeybiyay matooro qaar ka mid ah beeralayda Beledweyne -
HomeWararkaMadaxweyne Waare oo u qeybiyay matooro qaar ka mid ah beeralayda Beledweyne
Madaxweyne Waare oo u qeybiyay matooro qaar ka mid ah beeralayda Beledweyne
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta guddoonsiiyay matooro loogu talo galay waraabka beeraha qaarka mid ah beeralayda ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Qeybinta matooradan ayaa waxaa maamulka Hirshabelle ka gacansiiyay Hey’adda ARC kaddib munaasabad ka dhacday hoolka shirarka magaalada Beledweyne, waxaana munaasabadda goob joog ka ahaa xubno ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Hirshabelle, mas’uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo, iyo qaar ka mid ah beeraleyda gobolka Hiiraan.
Madaxweyne Maxamed Waare oo munaasabadda ka hadlay ayaa ku dheeraaday ka sheekeynta muhiimada ka faaideysiga wax soo saarka beeraha hirshabelle,isagoo xusay in barnaamijkani uu qeyb ka yahay qorshaha lagu horumarinayo beeraleyda Deegaanada Hirshabelle, waxaana uu tilmaamay in muhiim ay tahay in laga faaideysto biyaha webiga shabeele taa bedelkeeduna aysan noqon mar in uu wabiga uu fataho marna uu qalalanyahay.
“Barnaamijkani runti waxa uu qeyb ka yahay mashaariicda lagu xoojinayo adkeysiga beeraleyda ay u adkeystaan abaaraha, fatahaadaha si ay u soo saartaan dalagooda, gaar ahaan wax soo saarka la iib geeyo ay qudaartu ugu badantahay, runtii barnaamijkani waxa uu horseed u yahay barnaamij weyn oo u jeedadiisu ay tahay in nolosha beeraleyda hirshabelle wax looga bedelo qeyb ka mid ah, barnaamijyadaas maalgalinayo deeq beexiyayaal kale duwan, qeybta ugu weyn waa qeybta lagula tacaalayo, ee ka hortagayo fatahaadaha ee mar walba soo noqdo” Ayuu yiri madaxweyne Waare.
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa u mahaceliyay hey’ada ka gacan siisay maamulka qalabkani oo muhiimad gaar ah ugu fadhiyo beeraleyda Soomaaliyeed gaar ahaan beeraleyda Hirshabelle, waxaana uu xusay in muhiimad gaar ah ay ugu fadhiso kor u qaadida xirfadda iyo aqoonta beeraleyda ayna ku howlanyihiin in laga faaideysto wax soo saarka dalagyada beeraha.
Maamulka hirshabelle ayaa qorsheeyay 1535 matooro in looga faa’ideeyo beeraleyda hirshabelle iyadoo beeraleyda magaalada Jowhar horey la guddoonsiiyay matooro sidaan oo kale, waxaana maanta madaxweynaha gacantiisa uu ku Guddoonsiiyay 375 ka mid ah beeraleyda magaalada Beledweyne iyo deegaannada hoosyimaada.